အဆိုတော်လေးဖြူ အကြောင်း - ကိုရှမ်းလေး ®
» အဆိုတော်လေးဖြူ အကြောင်း
ကျွန်တော်လဲ ကြံကြံဖန်ဖန် ရှာတတ်တာဆိုတော့ အဆိုတော်လေးဖြူ အကြောင်းရေးထားတာတွေ့သွားတာနဲ့ ကောက်တင်လိုက်တာပဲ . . . ကျွန်တော့်လိုပဲ ရှဲချင်တဲ့သူတွေ အခမဲ့ ရှဲနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ ပြောထားတာပဲ. . . ကျွန်တော်ကလဲ ခရေဇီဆိုတော့ အကြိုက်ပေါ့ . . . အောက်မှာဖတ်ကြည့်ဗျာ . .. .
အဲဒါကတော့ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာ အုပ်ချုပ်သူအဖြစ်လုပ်ရပါတယ်။
ကျနော်နဲ့အတူနေတဲ့ကောင်လေးက သီချင်းထက်ဂစ်တာတီးတာကို ၀ါသနာပါပါ တယ် ။ဂစ်တာတီးတာကတော့ ကျွမ်းကျင်အဆင့်မှာရှိပါတယ်။သူ့မှာရှိ JVC စတီရီယိုကက်ဆက်ကလေး ရှိပါတယ်။
သူနဲ့တွေ့မှ နိုင်ငံခြားက ရော့ဂစ်တာဘုရင်တွေဖြစ်တဲ့ ဂျင်မီဟင်းဒရစ်တို့၊စတီဗိုင်းတို့၊ဂျိုးဆက်သနီတို့ဆိုတဲ့
နာမယ်တွေရော သူတို့လက်သံဒေါင်ဒေါင်လန် တွေကိုပါကြားဘူးပါတော့တယ်။
သူကတော့ တီးလုံးတွေဖွင့်ပြ ပြီးရင် ဒီနားလေးကတီးလို့အရမ်းခက်တာ ဘယ်လိုတီးရတာတို့ကိုပြောရင်းသူ့ဟော်လိုဂစ်တာလေးနဲ့လဲ
တီးပြပါတယ်။တက်ပင်ပေါက်တာက ဒီလိုဆို ဂစ်တာကြိုးကိုလက်နဲ့ပုတ်ပုတ်ပြီး အသံတွေထွက်အောင် လုပ်လုပ်ပြတာ။
အစကတော့ကျနော့်နားထဲမှာဒေါင်ဒေါင် ဒန့်ဒန့်တို့ ဒွန်……………ဒူန့်ဒူန့်တို့ကို ဘဲကြားတာပေါ့။
နောက်မှသူက ရော့စကေးကဘယ်လို သူကဒရမ်ရိုက်ချက်ပေါ်မှာမှီပြီး အသံကို ရစ်တင်တို့ဆွဲတင်တာတို့တွေကိုပြောပြလို့လား
ဒါမှမဟုတ်နေ့စဉ်ကြားနေရလို့ နားယဉ်ပြီးနားထောင်တတ်လာလို့လားတော့မသိ သူတို့တီးတဲ့တီးကွက်တွေကို ခံစားလို့ရလာသလိုပါဘဲ။
မြန်မာပြည်မှ ဂစ်တာဆရာကြီးက စောဘွဲ့မှူးဆိုတာရယ် သူသင်ပေးနေတဲ့ထွက်မလာသေးတဲ့ချစ်စမ်းမောင်ဆိုတာရယ် အဆိုတော်လွှမ်းမိုးကလဲ ဂစ်တာအတီးကောင်းတယ်ဆိုတာတို့ သီချင်းအေးအေးလေးတွေဆိုတဲ့ ခင်မောင်တိုး သီချင်းတွေမှာ စန္ဒယားလှထွတ်သား ဇော်မျိုးထွတ်က သီချင်းဆိုလိုအပိုဒ်တွေမှာ ရော့စကေးဝင်အောင်ဘယ်လိုတီးတယ်ဆိုတာတွေကိုပြောပြတော့ သိလှပြီလို့ထင်ထားတဲ့ကျနော့်မှာ ပါးစပ်အဟောင်းသားပါ။
သူကဆက်ပြောပြပါသေးတယ် လူတွေက ရော့က်ဆိုရင်ဝုန်းဒိုင်းကြဲပြီးဆူနေအောင်တီးကြဆိုကြတာကိုထင်နေတယ်
အဲဒါမှားတယ် ရော့က်မှာလဲ အအေးလေးတွေရှိပါတယ်။ရော့က်ဆိုတာ ဂစ်တာတီးတဲ့စကေးတစ်ခုကိုသတ်မှတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။
သူက အရပ်ရှိုးပွဲလေးတွေမှာလဲ အပျော်တမ်းလိုက်တီးပါတယ် ပိုက်ဆံပေးငှားတယ်ဆိုတဲ့ပွဲမှာတောင် သူကပိုက်ဆံထပ်စိုက်ရတာများပါတယ်။
သူ့မှာလဲ ဂီတနဲ့ပါတ်သက်တဲ့အပေါင်းအသင်းတွေက အများကြီးပါ။
ရော့က်အဆိုတော်အသစ် အသံအစုံမထည့်ရသေးဘူး ခွေကြမ်း (3)ပုဒ်ထဲဘဲပါ ပါတယ်။
(သန်းခေါင်ယံ ညနက်ထဲ သံစဉ်များနဲ့……………….အလင်းရောင်………..ရင်ခုန်သံတွေနီးစပ်ပါရစေအချစ်ရေ……………..)ပါဘဲ။
ဘယ်သူလဲလို့မေးတော့ မကြာခင်ထွက်မဲ့ အဆိုတော်အသစ် ပါတဲ့။
(အလင်းရောင် ဆိုတဲ့ အလွမ်းသီချင်းလေးရယ် ။ကမ္ဘာကြီးကလုံးပြီးဝိုင်းနေတော့ရယ်။ညရဲ့ဆူးရယ်ပါ။
ဒါလေးနားထောင်ပြီးလို့မကြာခင်မှာဘဲ ကန္တာရလမင်းဆိုတဲ့ခွေလေးနဲ့ လေးဖြူဆိုတဲ့
မြန်မာပြည်က ရိုးရိုးလေးဝတ်လို့ အေးအေးလေးနေတတ်သူ ရော့က်ကာတစ်ယောက်ကိုမွေးဖွားပေးလိုက်ပါတော့တယ်။
နောက်ဆက်တိုက်ဘဲ ပင်လယ်အော်သံဆိုတဲ့ခွေလေးထွက်လာတဲ့အခါမှာလေးဖြူဟာခိုင်မာသော ဘ၀ကို ရယူနိုင်သွားပါတယ်။
ဘာလို့ခို်င်မာတဲ့ဘ၀ကိုရယူနိုင်တယ်လို့ပြောရသလဲဆိုရင် တစ်ချို့သောအဆိုတော်များမှာ (ဥပမာ ဗဒင်)ပထမခွေရဲ့အောင်မြင်ပေမဲ့
နောက်ခွေမှာ ကျတော့ ခပ်အေးအေးဖြစ်သွားတတ်လို့ပါဘဲ။
ရော့က်သီချင်းဆို ဆူမှညံမှ ပွက်လောရိုက်မှလို့ထင်နေတဲ့သူများ ကို အလင်းရောင်လို လွမ်းတဲ့စိတ်လိုသီချင်းအေးအေးလေးများနဲ့ဖမ်းစားထားနိုင်တာပါဘဲ။
နောက်ပြီး မြန်မာပြည်မှ ပထမဆုံးလို့ပြောနိုင်တဲ့ နှစ်ပုဒ်ထဲပါတဲ့မဉ္ဇူရီဆိုတဲ့
သီချင်းခွေလေးကို ထုတ်ပြခဲ့တာပါဘဲ။ဒါပေမဲ့ ငွေကြေးအပိုင်းမှာမအောင်မြင်တော့ တစ်ခါထဲပါဖြစ်သွားပါတယ်။
သူ့ညီအငဲနဲ့ သူ့တူမျိုးကြီးနဲ့တွဲလို့ စောဘွဲ့မှူးအမှတ်တရခွေပြီးတဲ့နောက်မှာ စင်ပေါ်မတက်တော့ဘူး အသက်ကြီးပြီဆိုပြီးနားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ နာဂစ်ရန်ပုံငွေပွဲအတွက်ဆိုပြီးအလှူပေးဘို့အတွက်စင်ပေါ်ပြန်တက်လာတဲ့အခါမှာချစ်သောပရိသတ်များက
အားပေးလိုက်ကြတာ ဘယ်သူမှလိုက်မမှီအောင် ၀က်ဝက်ကွဲပါဘဲ။
(လူကိုရူးမတတ်ဖြစ်စေတဲ့ …….သံယောဇဉ် …….ဒီသံယောဇဉ်………………….)တို့
ဆိုတဲ့ ထူးခြားစွာ ပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာအမှတ်တရသွားတီးထားတဲ့ B0B ကတော့သူ့နောက်ဆုံးခွေပါဘဲ။
သူနဲဇော်ဝင်းထွတ်ကို နိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဇော်ဝင်းထွတ်ကတော့ ၀တ်တားစားတာ လုံးဝအမြင့်တွေပါ။
လေးဖြူကတော့ ဂျင်းဘောင်းဘီ အနွမ်းလေး အကျီအကွက်ကလေး တီရှပ်ကလေးနဲ့ရိုးရိုးလေးဆိုတော့လူငယ်
လေးဖြူနဲ့အတူ မြန်မာပြည်က အိုင်စီလို့ခေါ်တဲ့တီးဝိုင်းရယ် (စောဘွဲ့မှူးကတော့ ဂစ်တာဘုရားပေါ့) ဂစ်တာသမားအသစ်ကလေး
ချစ်စမ်းမောင်(အတော်တော်တဲ့ပါရမီရှင်ပြောရင်မမှားပါ)ရယ် ကေအေတီဆိုတဲ့ သီချင်းရေးဆရာ အသစ်ရယ်မွေးဖွားလာပါတယ်။
နောက် လေးဖြူနဲ့ အသံဆင်တူတဲ့အဆိုတော်တစ်ယောက်ထွက်လာပါတယ်။
သူနာမယ်ကြီးလာတဲ့သီချင်းကလဲ မန်းလေး တက္ကသိုလ်ကညများကို လွမ်းတဲ့သီချင်းလေးတွေနဲ့ပါ။
လေးဖြူနဲ့တူဆိုနောက်မှသိလာရတာက လေးဖြူရဲ့ညီအရင်း နာမယ်ရိုးပေမဲ့ အကြားဆန်းနေတဲ့ (အငဲ)ပါ။
သူနဲ့သူ့အကိုတို့အိုင်စီ ရှိုးပွဲမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အတည်ပေါက်ဟာသတွေထုတ်သွားကြတဲ့
(အမျုိးအရင်းတွေက မယုံရဘူးတို့ ဟောကြည့် ……လူကြီးရှက်တော့ စပ်ဖြီးဖြီးကြီး)လို့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်
အငဲရဲ့နာမယ်ကြီးသီချင်းများကတော့ (85 မန္တလေးညများ။နူးညံ့တဲ့အမိန့်တော်အတုိင်း။မျှော်လင့်ခြင်းကွင်းပြင်။အကြည့်။
နောက်ထူးထူးခြားခြား ခင်မောင်ထူးသီချင်းကို ပုံစံသစ်နဲ့ပြန်ဆိုလိုက်တာကိုလူတွေခိုက်သွားတဲ့
(ဒွေးမယ်နော်ငွေတောင်ပြည်ပြန်သွား…………………..ဇာတ်ထဲမှာတော့ မင်းသားလေးလို သည်ဇာတ်ဟာအလွမ်းဆုံးဟေ……………………)
၏ ပထမဆုံးခွေ ထွက်ပြီးသောအခါ လေးဖြူ ၏ Vocal Power သည် အမည်း ကောင် တွေ ကို ယှဉ်နိုင်သော Vocal Power ဖြစ်ကြောင်း တစ်ချို့က ချီးကြူးကြသည်။ လူငယ်အများစုကတော့ အရူးအမူး စွဲလမ်းစွာဖြင့် လေးဖြူ ၏ အလံတော် အောက် ခိုလှုံလိုက်ကြတော့သည်။ လေးဖြူ စတိတ်ရိူးမှာ အလင်းရောင် သီချင်းကိုဆိုလျှင် ဖယောင်း တိုင်ကလေး ကလေးတွေမီးညှိကာ၊ ဂက်စ်မီးခြစ်ကလေးတွေ မီးညှိကာ လက်တွေ ဝေ့၀ဲ ကာ လိုက်ဆိုကြသည်မှာ အားရစရာ။
တစ်ခါက သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ တစ်ခု ကျင်းပသည်။ အကြောင်းအရာစုံ၊ သီချင်းမျိုးစုံ ပြိုင်လာကြ သော်လည်း နောက်ဆုံးဇကာတင် အဆင့်ရောက်သောအခါ လေးဖြူ သီချင်းဆိုမည့်သူ နှင့် ဇော်ဝင်းထွဋ် သီချင်း ဆိုမည့်သူ ဟု နှစ်မျိုးသာ ရှိတော့ကြောင်း တွေ့ခဲ့ရဘူးသည်။ IRON CROSS တီးဝိုင်းနှင့် တွဲကာ အရည်အခြင်းပြည့် အခွေတွေ ဖန်တီးခဲ့သည်။ ရန်ကုန်မဟာ သင်္ကြန်တွေကို ကြီးစိုးမင်းမူခဲ့ဘူးသည်။သို့နှင့် နောက်မှ ၀င်လာသော်လည်း ရော့ခ်ဘုရင်ကြီး ဇော်ဝင်းထွဋ်ကို ပခုံးချင်း ယှဉ်လာနိုင်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဂီတ လမ်းကြောင်း ကြီးပေါ်တွင် ဇော်ဝင်းထွဋ် က နေတစ်စင်း ဟုဆိုလျှင် လေးဖြူ က လတစ်စင်း အဖြစ် ၀င့် ထည်ခဲ့ဘူးသည်။
သို့နှယ် လူငယ်ပရိတ်သပ် က စတိတ်ရိူးတိုင်းတွင် သူ ထွက်မလာမခြင်း လေးဖြူ၊လေးဖြူ ဟု သံပြိုင်အော် ညာသံပေး ကာအားပေးခြင်းခံရသည့်တိုင်၊ အခွေထွက်လျှင် Promotion ကံစမ်းမဲ မပါပဲ အရူးအမူး လုဝယ်ကြသည့်တိုင်၊ သူ့ ကိုချစ်သော ပရိပ်သပ် က အားပေးမှုကို ပြသသည့်
အနေနှင့် IRON CROSS UNPLUGGED ဟူသော စတစ်ကာ၊ IRONCROSS ACOUSTICဟူသော စတစ်ကာ၊ ခဏလေးများ ဟူသော စတစ်ကာ များ ကို ကားများ၊ ဆိုင်များ ၊ အိမ်များ တွင် မကြုံစဘူးလောက်အောင် ကပ် ခဲ့ကြသေည်လည်းလေးဖြူ က သူ့ဟန်၊သူ့စတိုင် အတိုင်း မှန်သည်ထင် သည့်လမ်း ကို ရဲရဲလျှောက်လေသည်။
တစ်ခါက သူ့ကို ဗျူးသူတစ်ယောက် ကို သူ့သီချင်း နားမထောင်ဘူးဘဲနှင့် ဘာလို့ လာဗျူး သလဲ လို့
ပေါက်ကွဲခဲ့ဘူးသည်။ သူ့စတိတ်ရိူး မှာ သီချင်းဆိုနေတုံး လာပေးသော၊လာဆွဲပေး သော ပန်းကုံးများကို စိတ်မရှည်စွာ ဆွဲဖြတ်ပစ်ဘူးသည်။ မလေးရှား ပွဲ မှာ စင်ပေါ်တက်အား ပေးသူ တစ်ချို့ နှင့် ကတောက်ကဆ ဖြစ်ခဲ့ဘူးသည်။ သူ့ကို လေးဖြူ ဟု ဖြစ်စေသော၊ စတိတ်ရိူးတိုင်းတွင် အတောင်းဆိုခံရဆုံး ဖြစ်ခဲ့သော၊အလင်းရောင် ဆိုသည့် သီချင်းကို အကောင်းဆုံးသီချင်းများ လက်ရွေးစင် အခွေ ထုတ်သော အခါတွင် ဖြုတ်ထားခဲ့ခြင်းဖြင့် တေးရေးဆရာ ကို နာကျည်းမှုတွေ ပေးဘူးသည်။
သူ့အောင်မြင်မှု အထွဋ်ရောက်လုသော ပါဝါ၅၄ သည် ခေတ္တ အပိတ်ခံရဘူးသည်။ တကကသိုလ် ရိပ်သာလမ်းမကြီး က ခြံကျယ်ကြီးတစ်ခြံ ၏ နံပါတ် နှင့် တိုက်ဆိုင်နေလို့ အပိတ်ခံရတာလို့ တီးတိုးပြောခံရဘူးသည်။နောက်တော့ ၅၄ ပြုတ်ကာ ပါဝါ ဆိုသောအမည် နှင့် ဆက်ထွက်ခွင့်ရဘူးလေသည်။ သူ့ ညီ အငဲ က တေးရေးတေးဆို အဖြစ် အောင်မြင် နေချိန်တွင် လေးဖြူ က သီချင်းဆိုသက်သက် ဖြစ်နေခဲ့သော်လည်း အငဲ နှင့် တွေ့ဆုံခန်း တစ်ခု တွင် သူက အခုရူးချင်ယောင်ဆောင်နေတာပါ။ သူ(လေးဖြူ) သီချင်းတွေ စရေးတဲ့ အချိန် တုန်းက အငဲ အနေနှင့် သီချင်းရေးဘို့ ကြိုးစားနေတုန်း၊ လေးဖြူ က သီချင်းရေး တာ စောခဲ့ကြောင်း ပြောပြဘူးသည်။
ကော်ပီ သီချင်းတွေ ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်( နိုင်ငံတကာ နှင့် ယှဉ်နိုင်သော ၊ခွန်အားပြည့်သော စာသား၊ အရည်အချင်းပြည့်သော သံစဉ်) ကို သူ ရူး သွပ်သူ ဖြစ်သည်။ သူ အိမ်မက် မက်ခဲ့လေသည်။ ဒီ အိမ်မက် ကို ဖြစ်စေတာလွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်လောက်က သူ့ကို ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ကျင်းပခဲ့သော အာရှသီချင်း ပွဲတော် ကို မြန်မာပြည်ကိုယ်စားပြုအဖိတ်ခံရခြင်းကလည်းအချက်တစ်ချက်ပါလိမ့်မည်။သူမြန်မာကိုယ်
သီချင်းဆိုရမည် ဟု စဉ်စားသောအခါ သူဆိုစရာ လောက်လောက်လားလား ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်သီချင်းမရှိခဲ့။သို့နှင့်ထူးအိမ်သင်သီဆိုခဲ့ဘူးသော“ရာဇ၀င်များရဲ့
သတို့သမီး” ကို ဂျပန် နိုင်ငံတွင်ကျင်းပသော အာရှသီချင်း ပွဲတော် တွင် သီဆိုခဲ့လေသည်။ ခွန်အားပြည့်ဝသော အသံ၊စာသား၊သံစဉ် ဟု တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန် ဖော်ပြနေသော တီဗွီ စကရင် ကို ကြည့်ကာ ဂျပန်တွေက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။သို့ နှင့် ထူးအိမ်သင်၊ မောင်မောင် ဇော်လတ်၊ အယ်ဖြူ စသော ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်ဖန်တီးသူ များနှင့် တွေ့ဆုံလက်တွဲကာ အကောင်အထည်ဖော်ဖြစ်ခဲ့သော သူ့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် အိမ်မက် ကို လိပ်ပြာ တွင် ချပြခဲ့သောအခါ သူ့ပရိပ်သပ်တွေထက် ဂီတ သမားအချင်းချင်းကြား ချီးကြူးလေးစားမှုတွေ ရခဲ့ဘူးသည်။ အဆိုတော်ကြီး ဖြိုးကြီး နှင့် တွေ့ ဆုံခန်း တစ်ခုတွင် အခုလောလောဆယ် ဘာဖြစ်ချင်နေသလဲ လို့ မေးရင် လေးဖြူ ဖြစ်ချင်တယ် ဆိုသော စကားမျိုး ပြောခဲ့ဘူး
လေသည်။ ဖြူဖြူကျော်သိန်း သည်လည်း ကျောင်းသူဘ၀ က လေးဖြူ ၏ အမှတ်တရ လက်မှတ် ကို ရယူဘို့ အချိန်တော်တော်ကြာ စောင့်ပြီး ရင်ခုန်ခဲ့ရဘူးကြောင်း စာအုပ် တစ်အုပ်တွင် အမှတ်တရ ပြောခဲ့ဘူးသလို IRON CROSS စတိတ်ရိူးတစ်ခုတွင် လေးဖြူ ဟုရေးထားသော အလံ ကို လေထဲဝှေ့ရမ်း အား ပေးခဲ့သော ဖြူဖြူကျော်သိန်း ကို တွေ့ခဲ့ရဘူးလေသည်။
IRON-CROSS ACOUSTIC စတိတ်ရိူး ဖြင့် သူ့ပရိသပ်တွေကို အားပါးတရ ဖြေဖျော်ပြီးချိန်တွင် သူက မမျှော်လင့်ပဲ ကြေငြာချက်တရပ် ထုတ်လေသည်။ သူ စတိတ်ရိူး မဆိုတော့ ဟု။ အားလုံး အငိုက်မိသွားသလို ကြောင်သွားကြသည်။ အဆိုတော်ကြီး ဇော်ဝင်းထွဋ် က ဂီတလောကသား
ဖြစ်လာလျှင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် မပိုင်တော့ကြောင်း ၊ နားလိုတိုင်း နားလို့ မရကြောင်း ၊ သူကတော့ ပရိပ်သပ် ရှိနေသမျှ သီဆို နေဦး မှာဖြစ်ကြောင်း တွေ့ဆုံခန်း တစ်ခု မှာ ပြောကြားခဲ့ဘူးသည်။ လေးဖြူ မပါဝင်ပါ ဟု ကြိုတင်ကြေငြာ ထားသည့် တိုင် လေးဖြူ၊လေးဖြူ ဟု သံပြိုင်အော် ညာသံပေး ကာ ထွက်လာလိုထွက်လာ ငြား အော်ကာ သီချင်းတောင်းနေသော ပရိသပ်၊ လေးဖြူ စတိတ်ရိူး ဆိုလျှင် သီဆိုခ သိန်း သုံးရာ ပေးပါမည် ဟု ကမ်းလှမ်းလာသော ပရိုဂျူစာ များ ကို မျက်ကွယ်ပြုကာသူ သည် သူ့သီချင်းခွေ ကောင်းဘို့ အရေး ကိုသာ ကြိုးပမ်းနေတော့သည်။
ကျွန်တော်တို့ကြည့်ခွင့်ရသော လေးဖြူ ၏ နောက်ဆုံးစတိတ်ရိူး ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ရာ ရှိသော IRON-CROSSACOUSTIC စတိတ်ရိူး ကို ပြန်ကြည့်လေတိုင်း စိတ်ကြည်နှုးစရာ ကောင်းလေသော ဇတ်ကွက် တစ်ကွက် ကို တွေ့ခွင့်ရပါသည်။
“ကျွန်တော့ဘ၀ ကို အပြောင်းလဲကြီး ပြောင်းလဲစေသော သီချင်းတစ်ပုဒ် ကို ဖျော်ဖြေချင်ပါ တယ်” အစချီကာ ဂစ်တာသံ အင်ထရို ၀င်ပြီးချိန်တွင် “အလင်းရောင်” ဟု အသံပြာကြီး နှင့် စတင်လိုက်ချိန်တွင် မှင်သက်သွားသော ပရိပ်သပ်၏ ၀မ်းသာအားရ အားပေးသံ၊လက်ခုတ် သြဘာသံများကို ကြားလိုက်ရချိန်တွင် ကျွန်တော်ကတော့ တေးရေးသူ သော်ဒီဝေ ၏ ၀မ်းသာအားရဖြစ်နေမည့် မျက်နှာကြီးကို တွေးကာ ကြည်နှုးနေမိပါတော့သည်။
မှတ်ချက်။ ။ ဤ ဆောင်းပါးပါအကြောင်းအရာများသည် အခြားအခြားသော website နှင့် blog များ group များမှ ရယူဖော်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ် သံယောဇဉ်ကောင်လေး ၏ မူပိုင်မဟုတ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ လေးဖြူချစ်သူများအားလည်း လွတ်လပ်စွာ ပြန်လည် မျှဝေခွင့်ပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်အား ခွင့်တောင်းနေရန်မလိုပါ။
E - Book,
Anonymous21 January, 2014 01:45Thanks!!! Admin. . .ReplyDeleteAdd commentLoad more...
ဘိုဖြူ - ပြည့်စုံပါစေ [Album]
ဘိုဖြူ - ဆန်ရေ
MC လွှမ်းပိုင် - ရိုဟင်ဂျာ
လူသားက မွေးတဲ့ မြင်းသတ္တ၀ါ တဲ့
Korea Model Parts - 36
Steller Phoenix Photo Recovery
စုံတွဲသီချင်းများ - စုစည်းမှု
၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း - သီချင်းများစုစည်းမှု
DVD Slide Show Professional 8.51
ကေကေတီ - နှင်းပွင့်သစ္စာ
Pitbull Best Songs Collection
နောနော် - လက်ရွေးစင်
စိုင်းဆိုင်မောဝ် - Unplugged Live Show
R Zarni Collection
Protect Folder 1.1
Gilisoft File Lock Pro 4.1
Korea Model Parts - 35
Sai Htee Saing Collection
ချမ်းချမ်း - Collections
My Love Collection For Me
Korea Model Parts - 34
Korea Model Parts - 33
Korea Model Parts - 32
Korea Model Parts - 31
Plants & Zombie
Wonder Share DVD Photo Slide Show Maker
HD Mac Wallpaper Pack 2
HD Mac Wallpaper Pack 1
Korea Model Parts - 30
Big Bang9Tracks Collection
Korea Model Parts - 29
Korea Model Parts - 28
Korea Model Parts - 27
Korea Model Parts - 26
Korea Model Part - 25
Korea Model Part - 24
Taylorswift - Speak Now Disc 2